Umaki: ukumaketha ukusondela | Martech Zone
Umaki: ukumaketha okusondele
NgoLwesithathu, ngoMashi 18, 2015 Douglas Karr
I-SmartFocus imemezele kwi-Mobile World Congress namuhla ukuthi izobe ihlinzeka ngamabhakoni okuqala emhlabeni. Ama-beacon abonakalayo avumela ukumaketha okususelwa ebusosheni ngaphandle kokuhlanganiswa okunzima kwe-hardware noma ukugcinwa. Izinkampani zingadala imilayezo yendawo emincane ukuze inike amandla umuzwa wokuqukethwe usebenzisa nje uhlelo lwaphansi. Ubuchwepheshe be-SmartFocus's Message Cloud bunikeza abathengisi bomkhiqizo ukubuka okuphelele kwamakhasimende abo, okubenza bakwazi ukuletha ukuxhumana okwenziwe ngezifiso ngokwengeziwe okubandakanya okunikezwayo, izinkokhelo, ukwethembeka nezibuyekezo.
Abathengisi Bangayikhulisa Kanjani Imikhankaso KaKhisimusi Yeselula Ukukhuthaza Imali Engenayo
NgoMsombuluko, Disemba 1, 2014 Douglas Karr
Ngalesi sikhathi sikaKhisimusi, abathengisi kanye namabhizinisi bangakhuphula imali ngendlela enkulu: ngokumaketha kwamaselula. Ngawo nje lo mzuzu, bangu-1.75 billion abanikazi bama-smartphone emhlabeni wonke nezigidi eziyi-173 e-US, okubalwa ukukhuphuka kwama-72% emakethe yamaselula eNyakatho Melika. Ukuthengwa kwe-inthanethi kumadivayisi eselula kusanda kudlula ideskithophu okokuqala futhi ama-52% wokuvakashelwa kwamawebhusayithi manje enziwa ngomakhalekhukhwini. Noma kunjalo, isikhathi sokuhlala sabathengi siqhubeka
Eminyakeni eminingi, eminingi edlule bengingumhlaziyi wephephandaba. Isonto ngalinye ngangihlanganisa idatha kuzo zonke izinhlelo zethu zokukhiqiza nokusabalalisa futhi ngasebenza ukuthola lapho kunesikhathi noma imali engagcinwa khona. Kwakungumsebenzi oyinselele kodwa nganginobuholi obuhle futhi kule minyaka eyishumi engangisebenza lapho, sinciphisa isabelomali sethu sokusebenza unyaka nonyaka. Kwakuwumsebenzi ovuzisa ngendlela emangalisayo. Nganginomthwalo wami uqobo wesabelomali sezigidi eziningi